Ihostele yaseChic eKoh Lipe - I-Airbnb
Ihostele yaseChic eKoh Lipe
Igumbi elisetyenziswa nangabanye abantu e- ihotele sinombuki zindwendwe onguTimmy
UTimmy unezimvo eziyi-213 zezinye iindawo.
Masihlale apha! I-Chic Lipe yihostele ekumgangatho ophezulu e-Ko Lipe.
Yimizuzu emi-3 ukusuka kwizitrato ezihambayo ezi-5 imizuzu ukuya e-Sunrise beach kunye ne-6 ukuya e-Pattaya White sandy beach. Ligumbi lokwabelana
Indawo yokutyela yeChic ibonelela ngezona zidlo zixatyiswe kakhulu kwaye zinencasa ezivela eThai nakwihlabathi liphela. I-Chic yenzelwe injongo kwaye ikhululekile. Abahambi bayakonwabela ikofu ephuma simahla, iisokethi zombane ze-USB kunye nobona mgangatho uphezulu wokulala edolophini. QAPHELA: Eli asilogumbi labucala ngaphandle kwe "Breakfast"
Eli gumbi lingabhukishwa zezinye iindwendwe, kwaye linebhedi eziyi-6-10 ngaphakathi
Ihostele ehonjiswe ngobumnandi kwisiqithi saseLipe, iibhedi ezitofotofo, imfihlo yokulala ngenxa yekhethini kwiibhanti, amanzi okusela simahla, i-wifi ekhawulezayo, indawo entle engekude nokuhamba esitalatweni, ilungu labasebenzi abanobuhlobo.
Kulula ukuhamba ukuya e-Sunrise beach, i-Walking Street kunye ne-Pattaya Beach
Umbuki zindwendwe ngu- Timmy
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- เกาะสาหร่าย